Kyi Kyi Khin's Page - Myanmar Network
Kyi Kyi Khin's Likes
Kyi Kyi Khin's Friends
Kyi Kyi Khin's Discussions
Started Feb 22, 20130Replies2Likes
စာအုပ်များ အခမဲ့ ဖတ်ရှုရန်အတွက် Website ၁၈ ခု၁ ။ http://www.freebookspot.in/ အဲဒီ့ဆိုဒ်မှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၉၆ ခု ရှိပြီးတော့ Free down လို့ရတဲ့ စာအုပ်ပေါင်း ၄…Continue
Started this discussion. Last reply by Ko Ki Nov 6, 2012. 1 Reply2Likes
အချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု | Your Life Success
Started this discussion. Last reply by Wai Phyo Thu Feb 19, 2013.4Replies9Likes
အချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကျနော့်ဆီကို အီးမေးလ်ပို့လာကြတဲ့သူတွေ အများဆုံး မေးကြတာကတော့ အချိန်ဆွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါပဲ။သူတို့ဟာ တစ်ခုခုကို စလုပ်ချင်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်…Continue
မြန်မာ့ ပထမ ဦးဆုံးများ
Started this discussion. Last reply by Ko Ki Oct 13, 2012. 1 Reply2Likes
!!! မြန်မာတို့ရဲ့ ပထမဆုံးများ !!! ၁။ ပထမဆုံး သမ္မတ = စ၀်ရွှေသိုက် ၂။ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ် = ဦးနု ၃။ ပထမဆုံး အနောက်တိုင်းဆေး ဒေါက်တာ = ဒေါက်တာ ရှောလူး ၄။ ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန် ရေးသားသူများ…Continue
Pink Ribbon From San San Nu Yellow Ribbon From Hsu Yadanar Pink Ribbon From Kyi Kyi Khin
Kyi Kyi Khin's Page
Kyi Kyi Khin's Blog
Posted on August 1, 2011 at 10:242Comments 10 Likes
အသားဖြူတာဟာ မိန်းမတွေအတွက် လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့ အလှအပ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားညိုတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အသားဖြူဝင်း လှပဖို့ဆိုတာ ဘဝအတွက် ကြိုးစားရမယ့် ပန်းတိုင် တစ်ခုလိုပါပဲ။
အသားဖြူစေတဲ့ အလှကုန်တွေ ပေါသလို အသားဖြူစေတဲ့ သဘာဝဖြစ်နည်းတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ အသားဖြူချင်သူများ အတွက် သိသင့်သိထိုက်စရာ အဖြာဖြာကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သဘာဝဖြစ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ အသားဖြူအောင်…
Posted on July 29, 2011 at 14:595Comments 11 Likes
Posted on July 29, 2011 at 14:522Comments3Likes
At 18:48 on April 24, 2013, Mie Mie Ko said…
mmieko@gmail.comကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပေးပါရှင့်။
At 18:47 on April 24, 2013, Mie Mie Ko said…
မကြည်ကြည်ခင် WHOကခေါ်တဲ့ malaria အတွက် National professional officer post က in service doctor တွေဆိုရင်ရော ရနိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်
At 20:27 on March 21, 2013, saung nin said…
At 20:26 on March 21, 2013, saung nin said…
At 20:36 on February 11, 2013, Thuyain said…
မကြည်ကြည်ခင် ကျွန်တော်က စိုက်ပျိုးရေး နှင့်ကျောင်းပြီးထားတာပါ ။Bridge Asia Japan ကခေါ်တဲ့ အလုပ်က ဘာတွေလိုအပ်လဲ ဘယ်မှာလျှောက်ရမှာလဲ။ကျေးဇူပြုပြီး thuyain.yau.hc@gmail.com ကိုmailပြန်ပို့ ပေးပါ့လားအစ်မ
At 10:40 on December 16, 2012, Nyein La Pyait Phyo said…
သမီးက lCCI Level II ပြီးထားတယ် အလုပ်တွေပြောင်းတာလည်း ၅ ခုလောက်ဖြစ်နေပြီ အတည်တကျအလုပ်လေးလုပ်ချင်လို့ ကူညီပါနော်
At 14:05 on January 18, 2012, okkar (ဥက္ကာ) said…
Cute.I means your photo.Nice to meet you fri.
At 11:40 on September 26, 2011, lai lai win said…
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေး ပုံတွေကို အမ လာကြည့်သွားတယ်နော်...။
At 15:31 on June 1, 2011, Soe Thiha said…
At 14:52 on June 1, 2011, Soe Thiha said…